Afghanistan: Marka ay waddada nabadda ka dhibbadan tahay midda dagaalka - BBC News Somali
Afghanistan: Marka ay waddada nabadda ka dhibbadan tahay midda dagaalka
''Nabadda waxay ka adag tahay dagaalka'', sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Abbas Stanikzai oo ah ninka Taliban u qaabilsan wada hadallada Mareykanka iyo ururkaas.
Ururka Taliban ayaa wadahadallo dhawr wareeg ah la galay Mareykanka, kuwaasi oo ka dhacay dalkaasi Qadar, iyadoo looga gol lahaa in la demiyo colaadda dalkaas ka hureysa 18-ka sano.
Wadahadallada ayaa u muuqday kuwa guul ku dhamaanaya oo waxaa bishii September la filayay in heshiiska labada dhinac la saxiixo balse madaxweyne Trump ayaa su'aal geliyay heshiiska, ka dib markii ay Taliban qaadday weerar lagu dilay 12 qof oo uu ka mid ahaa askari Ameerikaan ah.
Saraakisha ururka waxay ka naxeen tallaabada Trump ee lagu hakiyay wadahadallada iyagoo madaxweynaha Mareykanka uga digay arrintaas.
Madaxweyne Trump oo la kulmay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan
Waa sidee xaaladda hadda?
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa dib u bilowday wadahadallada, waxayna labada dhinac u muuqdaan kuwa qirsan in xalka kaliya lagu soo afjari karo dagaalka Afghanistan in uu yahay wadahadal.
Sohail Shaheen, waa afhayeenka Taliban u qaabilsan arrimaha siyaasadda, wuxuuna BBC-da u sheegay iney socdaan wadahadalladii ugu dambeeyay oo ayna meel wanaagsan marayaan.
Maxaabiis is weydaarsiga Taliban iyo reer Galbeedka
Kooxda Taliban oo dad ku afduubatay Afqanistaan
Talibaan: Diyaar ayaan u nahay inaan wadaxaajood la galno Trump
Saraakiisha Dowladda Afghanistan ayaa waday cadaadis ku saaban in wadahalladan dambe lagu daro xabad joojin si goobaha ay Taliban haystaan ay noqdaan meelo amnigooda la isku halleyn karo.
Dhinaca kale waxaa weli socda qaraxyada iyo dhiigga lagu daadinayo dalkaas. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, in ka badan 2,500 oo qof ayaa sagaalkii bilood ee ugu horreyay sannadkan la dilay dalkaas.
Maxay Taliban doonaysaa?
Koox ka tirsan ciidamada Taliban
Warbixinta wadahallada oo dhameystiran ayaanan si buuxdo loo shaacin, balse sida uu shegay Mr Khalilzad waxaa heshiiska ka mid ah in ciidamo Mareykanka ee gaaraya 5,400, laga saarayo dalkaas 11 bilood gudahood.
Taliban waxay heshiiska ogolaaneysaa marka la saxiixo, ka dib waxay wadahadal la bilaabayaan ergada mataleysa dowladda Afghanistan.
Xabad joojinta ayaa ah hadafka koobaad ee inta badan ay doonayaan dadka reer Afghanistan, sidaa darteed waxay ahayd in qodobka ugu horreya ee wadahadallada laga dhigo.
Ciidamada Britain ayaa 2014-kii ka baxay Afghanistan
Ka waran doorashada?
Waxa kale ee sii murjinaya xaaladda dalkaasi Afghanistan waxaa ka mid ah doorashooyiinka.
Axaddii la soo dhaafay, saddex bilood ka dib doorashadii waxaa lagu dhawaaqay hordhaca natiijada iyadoo ay u muuqato in madaxaweynaha talada haya Ashraf Ghani dib loo dooran doono, laakiin ninka la tartamaya, Cabdullah Cabdullah ayaa sheegaya iney wax isdaba marin jirto.
Waxaa kale oo caqabad weyn noqon doonto wadahallada u dhaxeeya Taliban iyo Afghanistan kuwaasi oo la xirrira maamulka dowladda dalkaas.
Markii aanu eegnay dhinacaydaasi oo dhan waxay u muuqataa in waddadaha nabadda ay aad uga adag yihiin marka loo barbardhigo dagaalka dalkaas.
Trump oo booqasho kedis ah ku tegay Afghanistan
29 Nofembar 2019
7 Juunyo 2018
19 Nofembar 2019